Akụ Crypto na Cryptocurrencies: Gịnị ka anyị kwesịrị ịma tupu iji ha? | Site na Linux
Emeela ka ọ pụta ìhè ma ọ bụ bụrụ ihe omuma nke uwa nke uwa isiokwu nke Cryptoassets, karịsịa nke metụtara mbipụta nke Ego, n'ihi na mwepụta nke Ihe mkpuchi Libra na ya "Calibra obere akpa" site na «Libra Association» nke ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ kachasị elu nke teknụzụ na azụmahịa kọmputa kọmputa ụwa bụ akụkụ, n'etiti ha Facebook, dị ka a tụlere n'oge na-adịbeghị anya na post anyị akpọ: Obere ego dijitalụ Facebook nke Libra na obere ego dijitalụ nke gị.
Ke adianade do, ọhụrụ rebound na ahịa nke mbụ, nke a kacha mara amara na nke a na-ejikarị na Cryptocurrency, akpọ «Bitcoin», onye ọnụahịa ya ugbu a (June-2019) dị ihe dị ka $ 10 puku (USD) ejirila aka ike gbawaa na akụkọ mgbawa na ụwa dị ugbu a na ọdịnihu Cryptoassets. Kedu ihe na-eme ka ọ dị mkpa ịme akụkụ, okwu ma ọ bụ echiche metụtara Cryptoassets na Cryptocurrencies iji mee ka ihe ịga nke ọma nke nkuchi ha dịkwuo elu, ebe ọ bụ na ndị a ha na-eme ka ihe ịga nke ọma ha dabere na ntụkwasị obi na ojiji nke ndị ọrụ ha.
Ugbu a na gburugburu ụwa enwere ọmarịcha ma baa uru akụ crypto na ọrụ cryptocurrency na-aga n'ihu. Fọdụ bụ ọrụ ndị na-adịbeghị anya na n'ọdịnihu nkwuputa nke na-aga aka na ụlọ ọrụ ụlọ akụ nke ụwa ugbu a, ndị ọzọ bụ ọrụ ochie na nke na-adịbeghị anya ndi oru ohuru nke na-aga aka na nnukwu na obere ụlọ ọrụ nzuzo na nke azụmahịa, na ole na ole bụ ọrụ dị ugbu a na nke na-abịa na-akpali aka na ahụ mmadụ na mba ụfọdụ.
Maka nke a, ọ bara oke uru ịmara ma ghọta nke ọma dịka ha dị Akụ Crypto na Cryptocurrencies na ngwa ọrụ ha na teknụzụ ha niile maka abamuru nke ha na nke ndị niile oge ụfọdụ enwere ike ịkpọ anyị, manye anyị ma nyekwa anyị iwu ka anyị jiri ya.
1 Nkọwa okwu na teknụzụ metụtara
1.1 Dijitalụ Economy
1.2 Teknụzụ Ego
1.3 Kesawanye Akaụntụ Akaụntụ (DLT)
1.4 Teknụzụ Blockchain
1.5 Ngwuputa Dijitalụ
1.6 Tokens, Cryptoassets na mkpuchi
1.7 Mgbanwe ego Cryptocurrency
Nkọwa okwu na teknụzụ metụtara
Ọ bụ mpaghara azụmahịa dị na mmepe na mmụba zuru oke. Ọ na-ezo aka n'ozuzu ya azụmahịa eletrọniki ma ọ bụ nke dijitalụ rụrụ na ịntanetị na Teknụzụ Ozi na Nkwukọrịta Okwu (ICT) iji mee ma nweta ngwaahịa na ngwaahịa ọhụrụ na ngwa ahịa dị ole na ole. Ọ bụ ezie na Ahịa Electronic na-ezo aka n'eziokwu ahụ n'onwe ya, usoro ịzụta na ire ngwaahịa site na kọmputa, dịka ngwa mkpanaaka na andntanetị.
Mpaghara ọhụrụ a gụnyere ma jikọta nwayọọ nwayọọ na teknụzụ nke mpaghara dị iche iche (agụmakwụkwọ, ọrụ, ntụrụndụ, ego, azụmahịa, telekomunikashions) iji nwetakwuo nke ọma, nchekwa na usoro ahaziri iche maka mmadụ niile.
Na Digital Economy, Servesntanetị na-eje ozi dị ka ikpo okwu zuru ụwa ọnụ maka ọgbọ nke ọrụ, ịmepụta akụ na ụba, na nkesa na oriri nke ngwaahịa na ọrụ. Ihe a niile iji gboo mkpa na-eto eto nke ọha mmadụ taa, ọha na eze na nkà na ụzụ dabere na ihe ọmụma.
Teknụzụ Teknụzụ, ọtụtụ oge akpọrọ «Nkà na ụzụ na nkà na ụzụ» ma ọ bụ FinTech, bụ echiche nke aha ya sitere acronym nke bekee okwu "Ego Teknụzụ". Ọ na-ezo aka na teknụzụ ọgbara ọhụụ niile ndị otu (ụlọ ọrụ, azụmaahịa na ụlọ ọrụ), ọha na eze na nkeonwe, na mpaghara ọ bụla (ọrụ ego, azụmahịa, teknụzụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya) iji mepụta ma nye ngwaahịa, ngwaahịa na ọrụ ọhụụ.
Ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe, na-ewere naanị dị ka FinTech naanị iji setịpụrụ ụlọ ọrụ na ngalaba ego nke na-enyere echiche ọhụrụ na usoro akụ na ụba na azụmaahịa site na iji ICT ọhụrụ na nke ọhụụ. Otu n'ime teknụzụ nke metụtara echiche a bụ Distributed Accounting Technology (DLT) na Blockchain Technology (Blockchain) na Crypto-commerce (Cryptoassets na Cryptocurrencies).
Na nchịkọta, Teknụzụ Ego nwere ebumnobi iji mee ka teknụzụ ọgbara ọhụụ na-enye ọnụọgụ kachasị nke ndị ahịa nwere ike ịnweta, ngwọta ka mma (ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ) ego na azụmaahịa dị mfe inweta, akụnụba, ịrụ ọrụ nke ọma, oke, nghọta, nchekwa na nke onwe.
Kesawanye Akaụntụ Akaụntụ (DLT)
Ekesa Teknụzụ Ledger ekesara, nke a makwaara site na okwu nzuzo ya na Bekee DLT site na nkebi ahịrịokwu a "Nkesa Ledger Teknụzụ" A na-ejikarị ya eme ihe na mmepe nke onwe, mana gụnyere Blockchain Technology, nke bụ otu ihe ahụ mana mpaghara mmepe ọha na eze. DLT na-ezo aka na teknụzụ n'ụzọ zuru oke, ya bụ, na teknụzụ nke na-eme ka azụmahịa dị na Internetntanetị na nchekwa ma na-enweghị ndị nnọchi anya, site na ọdụ data kesara, nke na-ekwe nkwa adịghị agbanwe agbanwe na nchekwa nke data nke data.
Ikwu okwu banyere DLT gunyere, echiche nke nkesa na netwok, nke na-ezo aka na ndị agha ahụ na-echekwa otu nchekwa data ejiri, iji gbochie ịmegharị data ahụ, belụsọ na enwere 51% ọgụ, nke bụ ihe ọ bụla karịa mwakpo ebe onye omekome na-enweta ọtụtụ n'ime ọnụ ọgụgụ ahụ, na-etinye aka na mkpebi ntanetị, na-achịkwa ịgbanwe ihe niile n'uche. N'ihi ya, mebie ụkpụrụ nke gọọmentị na netwọkụ, nke na-anwa ime ka ọchịchị onye kwuo uche ya kwenye n'etiti ndị sonyere (ọnụ), nke mere na enweghị aghụghọ ma ọ bụ aghụghọ n'etiti ha.
Echiche nke Blockchain ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na DLT. Ime ka ihe atụ iji ghọta echiche abụọ ahụ nwere ike ịsị na, na-ekwu okwu banyere ego, DLT ga-abụ echiche ya nke «Ego» na Blockchain ga-abụ otu otu akpan akpan, ihe atụ, na Dollar, Euro, Ruble ma ọ bụ Yuan. Dịka otu n'ime ha bụ otu n'ime ọtụtụ ego, Blockchain bụ DLT. DLT bụ okwu ọnụọgụ, na Blockchain bụ okwu akọwapụtara nke ọma, nke sitere na ọganihu na akụ crypto, ọkachasị cryptocurrencies. Ya mere, mgbe ị na-ekwu maka Blockchain, otu na-ezokarị aka na nyiwe mbụ nke "Bitcoin", ịbụ onye mbụ e kere.
Teknụzụ Blockchain, nke a makwaara dị ka Blockchain, site na aha ya na Bekee, na-ekwu banyere nke ahụ teknụzụ nke gụnyere usoro nke mgbochi na-echekwa ozi n'ime netwọkụ, nke ahụ ga-enwerịrị ma gosipụta ya site n'aka ndị ọrụ ya site na okike ya ruo na njedebe. Na ebe ngọngọ ọ bụla nwere pointer hash na nke bu ya ụzọ, na-ekepụta njikọta njikọta. A na - ejikọkwa Blockchain na aha nke nzukọ nzuzo nke na - eme ka onye na - enyocha ihe mgbochi nwere aha ahụ.
Na Blockchain, a hash bụ ihe ọ bụla karịa set nke random digits na-eje ozi dị ka obere nnọchiteanya nke ndị ọzọ data nke ọ bụla size. Ejiri ya iji gbochie wayo na teknụzụ a kwuru. Ebe ọ bụ na ngọngọ ọ bụla nwere ekike iche nke e kenyere ya, na mgbakwunye na data echekwara na ya na hash nke ngọngọ gara aga. A na-eji Hashs eme ihe n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ọdịnaya nke ngọngọ gbanwere, hash nke ngọngọ ahụ na-agbanwe. Ma ọ bụrụ na agbanwere ahịhịa na-enweghị ngwaahịa nke mgbanwe ọdịnaya, nkwụsịtụ na-apụta na mgbochi niile mgbe emechara ya.
Así Blockchain na-abụ ụdị nkwupụta nke teknụzụ ahaziri ahazi na sistemụ ezoro ezo, nke na-enye ụzọ dị mma ma nwee ntụkwasị obi maka ndị ọrụ, njirimara ha, data na azụmahịa, na-enweghị mkpa maka ndị nnọchi anya, site na Internetntanetị. Uzo nke n’eme ka ihe obula mee bu ihe ziri ezi, dikwa ire na nke anaghi agbanwe agbanwe, ya bu na o nwere odighi agbanwe agbanwe.
Ngwuputa Dijitalụ na-ezokarị aka n'ọrụ (ụzọ ma ọ bụ omume) nke ịgwọta ngọngọ, na-akwado azụmahịa niile o nwere iji nweta ụgwọ ọrụ na nloghachi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ usoro nke nnabata (ọnụ) na-edozi arụmọrụ cryptographic n'ime Blockchain, nke na -emepụta ihe ngosi, akụ crypto ma ọ bụ mkpuchi dị ka ngwaahịa ikpeazụ. Usoro a niile na - agakarị ije ọsọ nke akọwapụtara nke ọma na algọridim na teknụzụ akọwapụtaworị ụzọ.
N'ime ihe a kwuru, isi ọnụ na-egosipụta azụmahịa dị ka nke ziri ezi, iji kwakọba ya na ngọngọ ya na hash ya kwekọrọ, wee họrọ hash nke ngọngọ gara aga wee gbakwunye ya na nke ugbu a. Mgbe ahụ na-agba ọsọ nwa afọ Blockchain nkwenye algorithm iji hụ na ọnụ emeela mgbalị dị mkpa iji mezue ngọngọ e kenyere ma nata ụgwọ ọrụ ya.
Na Ngwuputa Dijitalụ, “Algọridim nkwenye” abughi ihe obula karie usoro nke ichoputa nke oyiri nke Blockchain di ire na nke adighi. Enwere ike ịkọwa iwu ndị a dịka: "A ga - ahụkarị ogologo oge ga - adị ka ihe ziri ezi bụ Blockchain nwere ọtụtụ blọk" yana "A ga - ahụta agbụ nke nwere nkwado kachasị mma. Enwere ọtụtụ «Nkwenye algorithms» ugbu a iji tụọ nkwado maka netwọkụ, mana n'etiti ndị kacha mara amara bụ: Ihe akaebe nke oru / POW na akaebe nke osisi / POS.
Ewezuga “Nkwenye Algọridim”, ndị a maara nke ọma «Ihe nzuzo ma ọ bụ algọridim “Nke bụ ọrụ na-agbanwe ozi ka ọ bụrụ usoro enweghị atụ a na-agaghị agụta agụta. N'ime Blockchain a na-eji ndị a iji nyochaa azụmahịa. Offọdụ n’ime ha bụ: CryptoNote, CryptoNight, Equihash, Scrypt, SHA na X11.
Tokens, Cryptoassets na mkpuchi
N'ime Blockchain, A na-akọwakarị Tokens dị ka akara aka cryptographic nke na-anọchite otu uru nke enwere ike inweta site na ya iji mee ihe n'ọdịnihu iji nweta ngwaahịa na ọrụ. N’etiti ọtụtụ ihe, enwere ike iji Token nye ikike, kwụọ ụgwọ maka ọrụ emere ma ọ bụ mezuo ya, nyefee data, ma ọ bụ dị ka mkpali ma ọ bụ ọnụ ụzọ ámá maka ọrụ ndị metụtara ma ọ bụ mmelite arụmọrụ.
Mgbe a A na-akọwakarị Cryptoactive dị ka akara aka pụrụ iche nke enyere ma zụọ ahịa n'ime ikpo okwu blockcheni. Ọ na-ezokarị aka na nke ọ bụla dị iche iche dị iche iche (mkpuchi, nkwekọrịta smart, usoro ochichi, n'etiti ndị ọzọ) na ụdị ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ na-eji cryptography arụ ọrụ.
N'ikpeazụ, Cryptocurrency bụ otu n'ime ọtụtụ ụdị Crypto Asset, nke n'aka nke ya, bụ ụdị nke ihe akpọrọ Digital Asset. Ebe a na-ewere Digital Asset dị ka ihe dị na usoro ọnụọgụ abụọ wee bịa na ikike ojiji ya, na ọ bụrụ na enweghị ya, enweghị ike iwere ya dị ka akụ dijitalụ. Ihe onwunwe dijitalụ nwere ike ịbụ dọkụmentị digitized ma ọ bụ faịlụ multimedia (ederede, ọdịyo, vidiyo, onyonyo) na mgbasa ma ọ bụ chekwaa na ngwaọrụ dijitalụ.
Mgbanwe (Exchange) nke Cryptocurrencies na-ezo aka na weebụsaịtị ndị a na-eme omume zuo na ire ahia cryptocurrencies. Ndị a na-enyekarị ohere ịrụ ọrụ na ụdị akụ ndị ọzọ dịka mbak ma ọ bụ nchekwa ego nke ndị otu obodo nabatara nke mebere ya.
Ebumnuche bụ isi nke a Omenala ma ọ bụ decentralized mgbanwe (DEX), bụ ikwe ka gị ndị ọrụ (Ndị ahịa) Ha nwere ike isonye na ahịa crypto a na-achịkwa iji nweta uru dabere na ọdịiche ọnụahịa (ụkpụrụ efu) na-eme na ya.
Na mgbakwunye, ọtụtụ na-abụkarị usoro nhazi nke ọma, na-agbaso ụkpụrụ nke KYC (Mara onye ahịa gị) y AML (Mgbochi Ego Ego). Ha na-emekarị ụgwọ maka ọrụ ha na guzosie ike mmachi isi obodo isonye na ikpo okwu ya.
N'ikpeazụ, Mgbanwe Agbanwe Agbasa (DEX) N'adịghị ka Mgbanwe ọdịnalaHa na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke a, Otú ọ dị, ndị nke mbụ nwere ikike ịrụ ọrụ na ụzọ a na-achịkwaghị achịkwa. nke ahụ pụtara, na ha enweghị ndị ogbugbo na ikpo okwu na-ejide onwe ya n'ihi mmemme ya. N'ihi nke a, ha na-agwakarị ọkwa nzuzo dị elu na ọbụnadị aha.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta, ọkachasị nke ọma na omimi banyere akụ Crypto na Cryptocurrencies, Teknụzụ Teknụzụ na Blockchain. Mana nke bụ isi, ihe ekpughere ebe a na-eme ka isi ihe kachasị mkpa nke onye ọhụụ ọ bụla ma ọ bụ onye ọ na-amaghị ga-amalite ịchọpụta ma mụta ịkwadebe maka mgbanwe nke ụdị ego elektrọnik ma ọ bụ nke dijitalụ a ga-apụta, nke obere obere na-eyi egwu ịkwụsị ego ego na ikwesi ntụkwasị obi, site na mba niile nha anya, ma ọbụnadị ịmalite ịsọ mpi na ngwa ahịa, dịka Gold, Silver, Copper, na ndị ọzọ; ma dochie ego mebere ụfọdụ weebụsaịtị.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, gụọ isiokwu ndị ọzọ metụtara isiokwu ahụ n'ime blọọgụ anyị, anyị na-akwado isiokwu ndị a: «Crypto-Anarchism: Sọftụwia Ego na Ego Nkà na ụzụ, Ọdịnihu?»Na«Latin America na Spain: Mmemme Blockchain na Cryptocurrencies".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Akụ Crypto na Cryptocurrencies: Gịnị ka anyị kwesịrị ịma tupu iji ha?
Ihe ederede a masịrị m nke ukwuu, n'ihi na a na-egosipụta ya n'asụsụ doro anya ma dị mfe nghọta, ọbụlagodi maka anyị ndị na-enweghị ihe ọmụma teknụzụ banyere isiokwu nke akụ crypto na cryptocurrencies, echere m na ọ bara ezigbo uru ịga n'ihu nyocha maka ihe ọmụma a, ebe nnabata nke ndị a virtual ego ga-abụ, n'ihi na ha ugbu a ibu, ndị kasị dịrị nchebe ụzọ mezuo akụ na ụba na ego azụmahịa na nso nso.
Zaghachi Luis josé Larez
Daalụ, Luis! Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị dị mma. Obi dị anyị ụtọ na isiokwu a bara ezigbo uru maka ụdị mmadụ niile, ọkachasị ndị bidoro mata ụwa a.
eziokwu na-atọ ụtọ
Zaghachi Otto Gutman
Daalụ, Hernán. Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị, echere m na ịgụ akwụkwọ ahụ enyerela gị aka nke ukwuu ịmalite ịmalite ụkwụ aka nri na ihe ọmụma banyere mpaghara a dị mkpa nke ihe ọmụma dị ugbu a.
Mmanya 4.11 apụla ...
Libhandy ọbá akwụkwọ iji mepụta nsụgharị mkpanaka nke ngwa GTK na Gnome